RANARIVELO Roël: “Aleoko tsy mihinan-kanina toy izay tsy mividy boky” – Blaogin'i Voniary
Izy no mpanoratra ny « VATO AMBANY RIANA », nahazo loka voalohany tamin’ny fifaninana tantara foronina nampanaovin’ny SYNAEL miompana amin’ny lohahevitra hoe « Sao hanambady aloha loatra ». Mpanoratra feno hatramin’ny fahatanorany, tsy nahasakana izany ny maha talen’ny fitantanam-bola azy eo amin’ny sehatry ny asa. Manasa anao ary ifampizara ny sombim-piainany.
Voniary : Inona no mety zavatra niavaka tamin’ny fahazazanao ka nahatonga anao amin’izao toerana izao ?
Ranarivelo Roël : Tao anaty tokantrano tsy dia nanan-karena loatra fa antonony no nitomboako. Dimy mianadahy izahay ary izaho no fahaefatra. Entitra sy masiaka ny rainay tamin’ny fitaizana ary nahatsiaro ho voafehy mafy mihitsy izahay. Vokatr’izany, tsy dia nivelatra amin’ny any ivelany loatra izahay fa ao an-trano lalandava. Izany no anisany nahatonga ahy ho tia vaky boky. Nahavita nandany vola tamin’ny fividianana boky mihitsy aza aho satria aleoko tsy mihinan-kanina toy izay tsy mividy boky. Dia nanomboka nitsiry koa ny fitiavana nanoratra teo amin’ny faha-13 taonako. Io indray koa angamba dia vokatr’ilay kilemako: niraiki-dela izay aho tamin’ny fahakeliko ka iomehezan’ny olona raha miteny! Noho izany, tsy narisika niteny firy aho fa tany amin’ny asa soratra no nanovokovoka: tononkalo sy tantara foronina fohy no niangaliako tamin’izany.
V: Nanao ahoana ny fivoaran’izay fiainana maha-mpanoratra anao izay?
RR: Nanomboka namoaka asa soratra tamin’ny gazety samihafa toy ny Hehy, Atrika, Maresaka sy ny sisa aho. Ary tamin’ny 1982 dia niditra tao amin’ny UPEM. Tamin’ny taona 1985, nandray anjara tamin’ny fifaninana tononkalo nampanaovin’ny gazety Dina ary ny fifaninanana amboaran-tononkalo nokarakarain’ny ministeran’ny kolotsaina sy ny EACROTANAL aho. Ny taona 1988 indray, namoaka ny amboaran-tononkalo ANGAROA izay niarahan’ny mpanoratra 8 mirahalahy. Fa herin-taona talohan’io, nanomboka niasa aho ka zary tsy nanam-potoana nanoratana. Maina ny tany fambolena, banga ny asa soratra!
V: Fa inona moa ny asanao?
RR: Adjoint administratif et financier, avy eo directeur administratif et financier no asako. Mampiloa-bolana ny maro mihitsy hoe toa mifanipaka ny asa fivelomako sy ny maha-mpanoratra ahy. Mpitsabo aza no asa nokasaiko atao fony kely aho fa efa teo am-pilaharana anatitra ny antotan-taratasiko mihitsy aho no tonga saina tampoka fa toa tsy ho vitako izany 8 taona izany. Lasa nankany amin’ny « Economie » aho fa io no fantako fa mora ahitana asa. Nitsaha-tsy voky anefa satria tsy maintsy najanona ny fianarana fa tafiditra niasa tao amin’ny SOMACODIS. Dia izay ny momba ny asako. Fa ny amin’ny asa soratra indray, talenta nomen’Andriamanitra io, ary nitombo teny noho ny famakiana boky sy ny fifampikasohana amin’ny mpanoratra.
V: Mino aho fa tsy nitsahatra tamin’iny taona 1988 iny izany ny famokarana asa soratra!
RR: Eny, tany amin’ny taona 2006 indray aho vao nandray anjara tamin’ny fifaninanana tononkalo. Ny taona 2011, nahazo “Grand Prix du Jury” tamin’ny fifaninana sombin-tantara nampanaovin’ny Alliance Française de Madagascar, fitsidihana tany Frantsa ny loka tamin’izany. Roa taona taty aoriana, nahazo laharana fahatelo tamin’ny fifaninanana tantara foronina nampanaovin’ny Akademia Malagasy ny tenako tamin’ny alalan’ilay tantara: ROM-BOAY. Manan-danja manokana amiko io tantara io ka tsy maintsy navoakako boky na dia tsy laharana voalohany aza. Ny fomba Antambahoaka, indrindra ny tsy fitaizana zaza kambana, izay vokatry ny fikarohana efa natomboka fony aho mbola nianatra, nampifandraisiko tamin’ny politikan’ny zaza tokana any Sina no narafitra ho tantara. Tantara mampalahelo, mampilatsa-dranomaso ary manohina ny foko mihitsy!
Rija Al-Jonah, Ranarivelo Roël, Esther Randriamamonjy, Riso Lalason (Sarin’ny SYNAEL)
V: Mahaliana tokoa ny hamaky izany rehetra izany. Mba zarao aminay àry ny teny entinao miaina!
RR: Ao amin’ilay boky “Rom-boay” ao mihitsy no misy azy: “Fa ananan-trosa ny mpanoratra, ananan-trosa ny mpandinika, ananan-trosa ny mpiara-belona sy ny manana andraikitra…”. Izany hoe misy zavatra andrasana amin’ny mpanoratra ka tokony havoaka fa tsy tahirizina ao anaty. Misy zavatra mila hetsehina ary misy zavatra tokony hiova.
V: Misy zava-bitanao na niainanao ve mampirehareha anao?
RR: Izaho aloha olona tsy tia misehoseho. Efa zatra ilay fiainana mipetrapetraka angamba! Fa rehefa tonga any amin’ny mpamaky ny asa soratra, mitondra fametraham-panontaniana ary mitondra fiovana dia izay no mahafaly ahy.
Isaorantsika Ranarivelo Roël tamin’ny tafatafa. Mampiomana anao mpamaky ny blaogy sahady fa hoentiko manaraka eto ny famintinana ilay tantara foronina “Rom-boay” izay mampihetsi-po sy mahalatsa-dranomaso tokoa.
fifaninanana SYNAEL, mpanoratra malagasy, ranarivelo harilala, ranarivelo roel, rom-boay, Vato ambany riana